Izixhobo zombane zabathengi-iPandawill Technology Co, Ltd
I-elektroniki yabathengi, ukusuka kwiimveliso ezimanyelwayo ukuya kwizinto ezinxitywayo, umdlalo okanye inyani yokwenyani, zonke ziya zixhuma ngakumbi. Umhlaba wedijithali esihlala kuwo ufuna inqanaba eliphezulu loqhakamshelwano kunye nezinto ze-elektroniki eziphambili kunye nezakhono, nokuba zezona zilula kwiimveliso, ukuxhobisa abasebenzisi kwihlabathi liphela.
EPandawill, sihambisa izisombululo zemveliso eziphezulu zombane zombane we-elektroniki, kuyilo, ubunjineli, kunye neprototyping, kwimveliso yobuninzi kunye nezisombululo zemveliso yobomi bokugqibela.
Njengenkampani yokuvelisa ikhontrakthi ngombane, sibonelela ngeenkonzo eziguqukayo ezigcweleyo ezivela kwiinkonzo zoyilo ukubuyisa ubunjineli kunye nolawulo lwe-obsolescence. Ukufunxa izinto ezifanelekileyo kunye nokuqinisekisa ukuba zonke zihlangana ngokugqibeleleyo ngokusekwe kwiimfuno zakho, bubuchule bethu obuphambili.
Uyilo, ubunjineli, iprototyping, indibano yebhodi yesekethe eprintiweyo (i-PCBA), ukwaziswa kwemveliso entsha (iinkonzo ze-NPI), izisombululo zonikezelo ezikrelekrele, ulawulo lwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda… Sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kubathengi bethu.
Ubuchule bethu bobuchwephesha, obudityaniswe nenethiwekhi yethu ekhethiweyo yabanikezeli abaqeqeshiweyo, busenza ukuba sibe liqabane lokuya kwisisombululo esisebenzayo sokuma ukusuka ekuqhubekeni ukuya kwimveliso yobuninzi kunye nezisombululo zemveliso yobomi bokugqibela.
Umboneleli ngenkonzo yokuvelisa umbane wee-Elektroniki zabathengi, amandla ethu abandakanya:
• Izixhobo zomsindo kunye neenkqubo
• Izixhobo zonyango zabathengi
• Izixhobo zemultimedia kunye nezixhobo
• Itekhnoloji yezemfundo